Dr. Tint Swe's Writings: Coffee and Pregnancy ကော်ဖီနဲ့ ကိုယ်ဝန်
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မကိုယ်ဝန်က ၈ပတ်ရှိပါပြီ။ အရင်က တနေ့ကို ကော်ဖီ ၃ခွက်လောက်သောက်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်စရှိတည်းက ကော်ဖီမသောက်မိအောင်နေပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအရမ်းသောက်ချင်နေလို့ ကော်ဖီသောက်လို့ရမလား သိချင်လို့ပါရှင့်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလည်း ကော်ဖီသောက်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် သားဖွါးမီးယပ်အသင်းအဆိုအရ တနေ့မှာ Caffeine ကေဖင်းဓါတ်ပါတာမှန်သမျှ 200 mg per day ထက်မများစေပါနဲ့တဲ့။ အဲတာဟာ သူတို့ဆီမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး Starbucks coffee စတားဘဂ်ကော်ဖီ 10-ounce cup ခွက်နဲ့ညီမျှတယ်။
ဒိထက်များသွားရင်တော့ အလေးချိန်မပြည့်တဲ့ကလေးနဲ့ ကိုယ်ဝန်အလိုလိုပျက်တာ သူများတွေထက် ပိုအဖြစ်များပါမယ်။ တနေ့ (၈) ခွက်သောက်တာနဲ့ ကလေးအသေမွေးတာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ လေ့လာမှုတွေ ပိုလုပ်သင့်တာမှန်ပေမဲ့ သတိနဲ့ နည်းနည်းသာ သောက်သင့်တယ်။ မသောက်ပါနဲ့လို့ မတားပါ။
သောက်တဲ့ကော်ဖီအမျိုးအစားနဲ့ အရည်အသွေးလည်းကြည့်ရတယ်။ ဆိုင်တွေကရောင်းတာတွေမှာ ကေဖင်းနည်းတာ များတာ မတူကြပါ။ 100 mg ပါတဲ့ 8-ounce ခွက်နဲ့ 400 mg ပါ 16-ounce ခွက်ရှိတယ်။ 16-ounce ခွက်ထဲမှာ caffeine ကေဖင်း 12 to 25 mg ပါတယ်။
• Coffee and Health ကော်ဖီ နဲ့ ကျန်းမာရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/coffee-and-health.html
• Coffee mix ကော်ဖီမစ် နဲ့ ကျန်းမာရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/coffee-mix.html
• Morning Coffee မောနင်း ကော်ဖီ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/morning-coffee.html
• Zhulian Instant Coffee Plus ဇူလီယန်ကော်ဖီ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/zhulian-instant-coffee-plus.html
၂။ ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန် ၁၇ပါတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်မရှိခင်က ကော်ဖီကြိုက်သူဖြစ်တော့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ တခါတရံ သောက်မိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကော်ဖီသောက်လို့ရလားရှင့်။ ရေနွေးကြမ်းကော သောက်လို့ရလားရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဆရာ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်တသက်လုံး စားသောက်လာတာတွေ အရက်ကလွဲရင် သင့်။ ဘယ်အရာမဆို များတာတော့ မကောင်း။
သုတေသနတွေဟာ ယူအက်စ်အေမှာလုပ်တာ သူတို့က ကော်ဖီစစ်တာ ကောင်းတာကို အသောက် များကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုစိုးရိမ်စရာ မရှိလောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆေးသုတေသနတော့ မတွေ့သေးပါ။
ရေနွေးကြမ်းကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်စေနိုင်။ မေးခွန်း သတ်ပုံမှန်တယ်။ ကျွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
My village မင်းရွာ
Shame on you! လွဲမရှက် မှားမရှက်
Twin Pregnancy (2) အမြွာကိုယ်ဝန် ဘာဆင်ခြင်ရမလဲ (၂)...
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပ်ဒိတ်
Common Medicines you really shouldn’t mix with Alc...
Hepatitis B Links လင့်တွေ
Red Silk-Cotton Tree Flower လက်ပံပွင့်ဋီကာ
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆန်းစစ်ချက်
ကိုကိုးကျွန်း နှင့် မြန်မာစာ
Order of Adjectives နာမဝိသေသန အစီအစဉ်
အဖြစ်မှန် သတ်ပုံမှန် ဇာတ်ကားကြီး ပြီးပါပြီ
Vaccine Links ကာကွယ်ဆေး လင့်များ
Pills Question တာဆေး အမေး
Child Immunization Chart ကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးဇယား
Infrared Temperature Sensors အင်ဖရာရဒ် အပူချိန်တို...
Cowboy Country နွားကျောင်းသား တိုင်းပြည်
အမေမှာတဲ့ ဆန်တခွဲ သုံးစိတ်နဲ့မလဲ
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတင်း နှင့် မြန်မာန...
Heart Beat နှလုံးက ဘာလို့ခုန်နေရတာလဲ
Sေhallow Water ရတိမ်မှာ
အရပ်ဆေး ကြော်ငြာဆေး လမ်းဘေးရောင်းတဲ့ဆေး
Cough into your elbow လူမသိအောင် ပညာပေးခဲ့ခြင်း
Hand Washing ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကနေ အမြတ်ထုတ်ပါ
ဖဆပလ နှင့် ပမညတ
Covid-19 ကိုဗစ်-၁၉ အပ်ဒိတ်
ချစ်ပါ မြတ်နိုးပါ အားပေးပါ
Screening ဆန်ကာ ဆန်ခါ ဇကာ
Writing Vs Pronunciation ရေးတော့အလွဲ ဖတ်တော့အမှား
COVID-19 ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် အပ်ဒိတ် အဆက် မြန်မာ...
Loudspeaker လောက်စပီကာ မယဉ်ကျေးမှု
Reiter's Syndrome ရိုက်တားစ် ရောဂါ
The Ava Bridge အင်းဝတံတား ခေါ် စစ်ကိုင်းတံတား
Majority Rules အများနဲ့ တယောက်
Presidents’ Day သမတများနေ့
Bad Luck ကံတရားနှင့် ကျန်းမာရေး
ဘယ်စာကို ဘယ်နှစ်ဝါ မောင်သင်မတုန်း ပြောခဲ့ပါဦး
Saturday symbols စနေနံများ
China တရုပ်သတ်ပုံ ပဟေဠိ
တရုပ်ပြည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်မြိ...
ချစ်တင်းနှော နှင့် လက်ဝဲသုန္ဒြရ
Coronavirus Close Contact Detector ကိုရိုနာဗိုင်းရ...
ရေတိမ်မှာ နေမကောင်းလို့မေးတာတွေကို ဖြေရခြင်း
Swimming Pool Infections ရေကူးကန်
Injury Care ဒဏ်ရာ
Raw eggs ကြက်ဥအစိမ်း
ပျော့ နှင့် ပြော့
နက်ဖြန် သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါ